Guudlaawe waxaa hor yaalla imtixaan adag! | KEYDMEDIA ENGLISH
Guudlaawe waxaa hor yaalla imtixaan adag!
Indhaha bulshada ayaa ku sii wada jeeda, habka uu Madaxweynaha Hirshabeelle, u maareeyo doorashada HOP135, kaas oo caan ku ah difaacii kiiska Ikraan Tahliil, oo ku maqan gacanta Fahad Yaasiin.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Madaxweynaha Hirshabeelle, Cali Guudlaawe, oo hore loogu amaanay sida uu u maamulay qeyb ka mid ah kuraasta labada Gole ee baarlamaanka ee taalla Jowhar iyo Baladweyne, ayay hadda hor taallaa xujo adag, oo micno togan ama taban u yeeli karta guud ahaan doorashooyinka uu qabtay.
11 kursi, ee la filayo in doorashadoodu ka dhacdo xarunta gobolka Hiiraan, 8-da ilaa 9-ka bisha oo Talaado iyo Axad ku beegan, ayuu qeyb ka yahay, kursiga Soomaalida oo dhan ay indhaha ku hayaan, ee HOP135, kaas oo baarlamaankii 10-aad ay ku fadisay Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi.
Xildhibaan Aamina, oo lagu xasuusto dadaalkeedii ku aaddana, sidii ay caddaalad ku heli lahaayen qowska Ikraan Tahliil Faarax, ayaa si weyn u qabsatay baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay, kadib markii uu soo baxay war sheegaya in Guudlaawe, kursigaas u xiray Cumar Faaruuq.
Bulshada ka hadashay doorashada kursigaan oo intooda badan farriintoodu ku socotay Madaxweynaha Hirshabeelle, ayaa xusay in kursigaan u baahan yahay caddaad dhab ah, si ka duwan kursi kasta oo ka tirsan Golayaasha, maadaama uu yahay kursiga juhdiga ugu badan galiyay raadinta cadaaladda kiiskii Ikraan.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, oo ka mid ah dadka sida weyn uga hadlay doorashada kursigaan, ayaa sheegay, in eedeysane Fahad Yaasiin, oo doonaya inuu duugo kiiska Ikraan, uu qarash xooggan ku bixinayo sidii meesha looga saari lahaa Xil. Aamino, isla-markaana uu dhabarka ka riixayo Faaruuq.
Haddii Ikraan, horey ugu maqnayd ninkaas, ma Aamino ayaa loogu dari karaa bahalku inuu cuno? MW Cali Guudlaawe, waxaan ugu baaqaynaa in uusan garabsiin dulmiga, sumcadii uu maalmahaan kasbaday ee uu uga soocnaa qaar sheegta madaxweyne goboleed oo ku caanbaxay kaba qaadnimana uusan wadadoodii qaadin. Ayuu yiri FIQI.
Xildibaan FIQI, wuxuu is weydiiyay, haddii codkii xaqqa ahaa ee Xildhibaan Aamino, ugu hiillisey walaasheed dhibbane ah iyo qoyskeeda loogu dhibaataynayo oo ay sidaas wax ku weydo, sidee qof kale ugu dhiiran karaa inuu xaqqa u hiiliyo!?
Sidoo kale, waxaa baraha bulshada si weyn loogu wareejiyay qoraal [farriin] ku socotay Guudlaawe, oo la rumeysan yahay inuu qoray mid ka mid ah, Musharixiinta Madaxweynaha, kaas oo magaciisa la qariyay.
Waraaqdaas, waxaa Cali Guudlaaw, loogu sheegay in dagaalka iyo kursi ka boobka uu Fahad Yaasiin ku hayo Aamino uu yahay mid meesha looga saarayo mid ka mid ah xildhibaanadii Hirshebeelle ugu qiimaha badnaa.